राज्य संचालन गर्न सक्ने क्षमतावान विद्यार्थी उत्पादन गर्छु : ल्हाक्पा शेर्पा | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन १८ गते ०८:५१
चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ल्हाक्पा शेर्पा
तपाईंले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेको कति भयो ?
विस २०७७ असार २८ गतेदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हादै आएको छु । मैले यो जिम्मेवारी पाएको एक वर्ष अलि बढी भएको छ । स्थानीय र युवा पनि भएकोले मलाई स्वस्फूर्त रूपमा यो जिम्मेवारी दिएको हो । मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने हो । परम्परागत रूपमा संचालन भैरहेका शिक्षालाई आधुनिक तवरबाट अगाडी बढ्ने सोचमा छु । म आफै पनि कक्षा ७ सम्म यहि विद्यालयमा पढेको विधार्थी हुँ । मलाई त्यही बेला देखी नै शिक्षक बन्ने सपना थियो । शिक्षण क्षेत्रमा मेरो एकदशक बढीको अनुभव छ ।
यस विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि केकस्ता व्यवस्था छ नि ?
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अहिले होस्टेल, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला आदिको व्यवस्था छ । विगत लामो समययता हिमालयन प्रोजेक्टले पनि सहयोग गरेको छ । यही हिमालयन प्रोजेक्टको सहयोगमा माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं । नेपाल सरकारको दरबन्दी दिएसम्म राहत शिक्षकलाई हिमालयन प्रोजेक्टले सहयोग गर्ने भनेको छ । त्यसपछि हामी स्थानीय तह, गाउँपालिका वा वडाबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्छौं । विद्यालयको सम्पूर्ण भवन संरचना हिमालयन प्रोजेक्टकै सहयोगमा बनेका छन् । बैठक कक्ष अर्थात् मिटिङ्ग हल निर्माण भएको छ । हिमालयन प्रोजेक्टले हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक संरचना बनाईदिएको छ । अब खासै नयाँ भवन बनाउनतर्फ जोड नदिने भनेको छ ।
तपाईं स्थानीय साथै युवा पनि हुनुहुन्छ, माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकजस्तो जिम्मेवारी सम्हालिई रहनु भएको छ, उद्देश्य के छ ?
अहिलेसम्म यो विद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीहरु ईन्जिनियर, डाक्टर, पाईलट तथा राज्य संचालनका महत्त्वपूर्ण निकायमा खासै पुगेको देखिदैन र छैनन् पनि । एकादुई वा नगन्य मात्रामा होलान् । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । मेरो उद्देश्य भनेको अब चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीहरु राज्य संचालनका महत्त्वपूर्ण निकायमा पुग्न सक्षम र क्षेमतावान विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो । त्यस्तै; उत्पादित विद्यार्थीहरु सभ्य समाज निर्माण गर्न आवश्यक तह र तप्कामा पुर्‍याउने हो ।
कहिलेकाहीँ कतिपय ठाउँमा विद्यालयले विद्यार्थीको सही मुल्यांकन गरेन भनेर आरोप पनि लाग्ने गर्छ नि ?
हाम्रो विद्यालयमा निष्पक्ष मुल्यांकन हुन्छ । हामी नातावाद, कृपावाद साथै आग्रही-पूर्वाग्रही भएर मुल्यांकन गर्दैनौं । आन्तरिक तथा बाह्य साधनद्वारा मुल्यांकन हुन्छ । सरसफाइ, ड्रेस, अनुशासन अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता आदिको पनि मुल्यांकन हुन्छ । त्यसकारण जो विद्यार्थी जस्तो छ उसले त्यही प्रकारको नतिजा पाँउछ ।
निम्नमाध्यमिक तहसम्म आफैले अध्ययन गरेको विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दा तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
अभिभावक तथा अन्य व्यक्तिले त्यो स्कुल राम्रो छ भनेको सुन्दा खुसी लाग्छ । यो कुराले हामीलाई हौसला बढाएको छ । मेरो रुचिको विषय पनि यही क्षेत्र हो । हामी सबै स्टाफहरु एक भएर लागेका छौँ । पुस्तकालय (लाईब्रेरी) कम्प्युटर, होस्टेल आदिको राम्रो व्यवस्था छ । राम्रो अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि स्कलरशिपको पनि वयवस्था छ । हाल हिमालयन प्रोजेक्टद्वारा ४०-५० प्रतिशत विद्यार्थी स्कलरशिपमा अध्ययन गरिरहेका छन । नेपाल सरकारले पनि कक्षा १ देखि ८ सम्म छात्रावृत्ति दिएको छ । त्यस्तै स्टेएट स्कोल नामक सँस्थाले पनि सहयोग गरेको छ ।
चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कुनकुन ठाँउका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ?
यस विद्यालयमा साविकको भकान्जे गाविस हालको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर ५ भरीका विद्यार्थीहरु, लिखुपिके गाउँपालिका ३ र ४ साथै छिमेकी जिल्ला रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको क्यामा, गुम्देल र भण्डारका विद्यार्थी अध्यनरत छन ।
कोरोना कहरमा पनि विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) तथा नेपाल सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्ड कत्तिको पालना गर्नु/गराउनु भएको छ त ?
नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले दिएको सबै कुरा पालना गर्न गार्‍हो छ । जस्तैः दुई मिटरको दुरी कायम गर्न भनिएको छ, त्यो हाम्रो विद्यालय लगायत अन्य विद्यालयलाई पनि अप्ठ्यारो छ । किनकी हामीसँग प्रयाप्त फर्निचर छैन । कक्षा कोठा साना छन् । विद्यार्थीको चाप धेरै हुन्छ । कि त त्यसका लागि दुई शिफ्टमा कक्षा संचालन गर्नु पर्‍यो । त्यो पनि त्यति सजिलो र संभव छैन । शिक्षक व्यवस्थापन गर्न पनि गार्‍हो छ । समयमै कोर्स सकिदैँन । ती बाहेक माक्स, सेनिट्राईजर तथा साबुनपानीको भने यथासक्य व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
२०७८ आश्विन ७ गते १२:१०